တရုတ်ပေးသွင်းမြင့်မား effici ...
Die-casting လူမီနီယံအလွိုင်း ...
ကြေးနီအပူပိုက် ၅ နှစ်ဝ ...
ရှန်ကျန်း ETL DLC ဦး ဆောင်သောဖိနပ်စီး ...
ထုတ်လုပ်သူကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်အချိန်မီးအိမ် Intelligence ရေစိုခံ 50w 100w 150w 200w နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအလင်းရောင်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရောင်အပူချိန် (CCT): ၂၇၀၀-၆၅၀၀k ဆီမီးခွက်မီးထွန်းနိုင်စွမ်း (lm / w): 160lm / w Colour Rendering Index (Ra): 80 Support Dimmer: ...
အားကစားကွင်းworkရိယာလုပ်ငန်းခွင်အလင်းရောင်5နှစ်အာမခံရေစိုခံ IP65 100w 200w 300w 400w 55000 lumens နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအလင်းရောင်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): ၆၀၀၀ ကီလိုမီတာမီးလုံးအလင်းအိမ်ထိရောက်မှု (lm / w): 730 LM, 73 Colour Rendering Index (Ra): 75 Support Dimmer: ...
Excellent ကအရည်အသွေး 30w 20watt ip65 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီး 80w 60w နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးခွက်လမ်းမီး
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရောင်အပူချိန် (CCT): 2700-6500k, အဖြူရောင် / အဖြူရောင် / အဖြူရောင်အဖြူရောင်အလင်းရောင်ထိရောက်မှု (lm / w): 110lm / w Colour Rendering Index (Ra): 75 ...
Super Bright New desig လမ်းကြောင်းလမ်း IOT စနစ် OEM / ODM 100W 150W နေရောင်ခြည်လမ်းမီး
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): ၆၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (နေ့အလင်းရောင်) Luminous Efficiency (lm / w): 110, 110 Colour Rendering Index (Ra): 70 Support Dimmer: ...
Remote Control ဥယျာဉ်လမ်းမီးအိမ်နှင့်အတူအရုဏ် All-in-One ဆိုလာ LED မီးအလင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရောင်အပူချိန် (CCT): ၂၇၀၀-၆၀၀၀ ကီလိုမီတာမီးလုံးအလင်းအိမ်ထိတွေ့မှု (lm / w): ၁၀၀၊ ၁၀၀ lm / w ဦး ဆောင်သောနေရောင်ခြည်သုံးအလင်းအိမ်အရောင်ပြန်ညွှန်းကိန်း (Ra): 70 ...
Intelligence ရေစိုခံ 200w 150w ဘက်ထရီ Die-cast လူမီနီယံနေရောင်ခြည်အလင်းရောင်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): 3000-6000K မီးလုံးအလင်းအိမ်ထိရောက်မှု (lm / w): 130, 130lm / w led solar street light အရောင်ရောင်ပြန်အညွှန်း (Ra): 75 ...
IP65 ရေစိုခံ 50W 100W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းတန်းထိရောက်မှုရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်အချိန်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): 5000K (နေ့ခင်း) မီးလုံးအလင်းရောင်ထိရောက်မှု (lm / w): 100, 100 Colour Rendering Index (Ra): 70 Support Dimmer: ...
China Good Polycrystalline silicon panel 20 watt 3000 lumen 100w LED အလင်းရောင်ထုတ်လုပ်သူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီး
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): ၆၀၀၀ ကီလိုမီတာမီးလုံးအလင်းရောင်ထိရောက်မှု (lm / w): 110 Colour Rendering Index (Ra): 70 Support Dimmer: ...
LED မီးအလင်းရောင်တပ်ဆင် bracket က ဦး ဆောင်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပံ့ပိုးမှု Dimmer - NO အလင်းရောင်ဖြေရှင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု - စီမံကိန်းတပ်ဆင်ခြင်းအလင်းရင်းမြစ် - လမ်းမီးခွက်တွင်အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် (ack): ...
China Factory 100w အပြင်ဘက်ရှိ ip65 စီးပွားရေးဒီဇိုင်းစျေးနှုန်းအပြည့်အစုံကိုနေရောင်ခြည်သုံးလမ်းပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): ၂၇၀၀-၆၅၀၀k ဆီမီးခွက် Luminous Efficiency (lm / w): 150 Colour Rendering Index (Ra): 70 Support Dimmer: ...
3 နှစ်အာမခံ 20w 80w 40w ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာပြင်ပရေစိုခံ IP65 60w နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းအလင်းရောင်အာရုံခံကိရိယာတွင်အရောင်းရဆုံးသော smart
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): ၂၇၀၀-၆၅၀၀ ကီလိုမီတာမီးလုံးအလင်းအိမ်ထိရောက်မှု (lm / w): 150, 150-160 Color Rendering Index (Ra): 75 Support Dimmer: ...
ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်မှု 200watt lighting 140lm / w သည်ကောင်းစွာမောင်းနှင်သူ 80w smart luces 100w street led light ကိုဆိုလိုသည်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်အရောင်အပူချိန် (CCT): 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K ဆီမီးခွက်မီးထွန်းညှိနိုင်စွမ်း (lm / w): 130-145lm / w Colour Rendering Index (Ra): 75/80 ...